Amena pakupedzisira anopa kuongororwa kwakakodzera-kwayo kwayo yepamutemo app | IPhone nhau
Amena anozopedzisira amupa yake yepamutemo app kuongorora kwakakodzera-kukodzera
Sezvo Orange yakamutsidzira ngano yechiratidzo Amena (ehe, iyo yakagovana nharembozha neAirtel kana Moviline), vazhinji vakasvetukira pabhendi reiyo Virtual Mobile Operator, iyo yakapa zvinonakidza masevhisi nemitero kubva payakatanga, asiwo zvinosuwisa kuti imwe mobile application yeIOS inokosha makore mashanu apfuura. Iine yazvino yekuvandudza izvi zvachinja, saka ngatitarisei pazviri.
1 Mharidzo chaiyo
2 Kuita uye kugona
Kana iwe wanga uchimbove mushandisi-kana zviri nani mutambure- weiyo yekare Amena app, iyo nyowani ichaita seyakakomborerwa iwe kubwinya. Yakarongeka zvakanaka, nerutsigiro rwakanakisa rwekugadzirisa mitsara yakawanda, ichiratidza dhata rese rinonakidza (kunyanya data rekushandisa uye bhiri rinotevera) rakajeka uye riine mabhatani mashanu kuti uwane mabasa akakosha atinopihwa nagreen opareta.
Muchikamu chimwe nechimwe tinogona kuwana rumwe ruzivo nezve izvo zvataurwa sevhisi, uye zvinogona kana shanduko yekuchinja kana isu tichifunga zvichidikanwa kana kondirakiti yekuwedzera masevhisi senge ekuwedzera data bhonasi izvo izvo zvino muzhizha iri ndinofanira. Kujekesa kunyanya chikamu che "Ini ndinogadzirisa mutsara wangu", uko kwatinogona kubvisa nekuisa masevhisi mune nyaya yemasekondi tisingachafonere kana kurasikirwa nemaminetsi akawanda kune manejimendi akareruka manejimendi.
Kuita uye kugona
Kuti iko kunyorera kwaenda kubva kune yakanyanyisa kusahadzika kuenda pasa zvakatenderwa Izvo hazvireve kuti ichine zvikanganiso zvakawanda zvekukwenenzverwa, kunyanya maererano nemashandiro. Hapana nguva iyo iko kunyorera kunonzwa 100% yemuno uye mune iyo iPhone 6s zvinonetsa kuti ifambe pakati pezvikwiriso, pasina hunyoro patinoita shanduko pakati pezvikamu uye kunonoka kurodha zvimwe zvinhu zvakanyanya.
Izvo zvakare zvakakosha kuratidza mikana ye ziviso yekuzivisa, kuve nekukwanisa kugamuchira zviziviso nenhau kubva kuna Amena, kudzora kwekushandisa kunoitwa kana zviziviso nezve shanduko dzinogadzirwa mushumiro yakananga muapp yedu.
Saka isu takatarisana nemanagement application iyo inokosheswa seanoshanda seAmena inokodzera, ichisiya kumashure chinotyisa vhezheni. Izvi hazvireve kuti kubva kuna Amena vanogona kuenderana, nekuti iko kunyorera hakusvike kune kwakakurumbira uye zvakajeka zvinogona kunge zviri nani maererano nekuita uye dhizaini pane dzimwe nzvimbo mariri, asi zvinofanirwa kuzivikanwa kuti iko kugadzirisa kukuru uye nekudaro kuri kuombererwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Amena anozopedzisira amupa yake yepamutemo app kuongorora kwakakodzera-kukodzera
iTunes 12.4.2 inosvika kugadzirisa dambudziko nemamwe mabara
Galaxy yaTrian yemahara kwenguva yakati rebei